Ihe nyocha GMO - GMO Research
Mafee gaa na isi aka nri igodo
Gaa na n'okpuru saịtị
Nchọpụta dị elu maka akụkọ ndị ọzọ
Chọọ Akụkọ Ndị Ọzọ
Kwado GMO Research
Etu esi achọ
Nyochaa sayensị nke GMO na ọgwụ ahụhụ ndị metụtara ya, yana mmetụta ha na ahụike, ọrụ ugbo na gburugburu ebe obibi
GMO Research database nwere ọmụmụ na akwụkwọ akụkọ nke na-edekọ ihe egwu ma ọ bụ ikike na mmetụta dị njọ sitere na GMO ("genetically modified," genetically engineered, "or" bioengineered "organism) na ọgwụ ndị metụtara ya na nri nri. Ebumnuche data ahụ bụ ihe enyemaka na nyocha maka ndị sayensị, ndị nyocha, ndị ọkachamara ahụike, ndị nkụzi na ọha na eze. A ga-enyocha nyocha miri emi nke ụfọdụ isi ọmụmụ. Enwere ike ịchọta nke mbụ Ebe a.
Chọọ maka akwụkwọ akụkọ ndị ọhụụ, isiokwu, isiakwụkwọ na ọdịnaya nnabata mepere emepe.
Chọọ akụkọ ndị ọzọ, dị ka akụkọ NGO na akwụkwọ, nke na-ezughi njirisi maka isi nchekwa data mana ha dịkwa mkpa ma dịkwa mkpa.
Iji chọọ ọdụ data anyị, tinye njirisi ọchụchọ gị n'otu n'ime ogwe ọchụchọ n'elu ma ọ bụ pịa Search site Keyword. Biko rụtụ aka na Etu esi achọ Peeji maka ozi ndị ọzọ gbasara ịchọ ọdụ data anyị.
Ọmụmụ ihe a ma ama
Akụkọ banyere GMO na Eziokwu
Mgbanwe nke ihe omimi na nke ndu na oke ụmụ nwoke na-eri na mkpụrụ ọka (Ajeeb YG)
Enweghị Mmeghachi Omume
Nchegbu oxidative nke glyphosate, AMPA na metabolites nke pyrethroids na chlorpyrifos pesticides n'etiti ụmụ akwụkwọ praịmarị na Saịprọs.
Ihe akaebe nke mbilite n'ọnwụ chlordecone sitere na glyphosate na French West Indies.
Mmetụta ikpughe ihe oriri na ọgwụ pesticides na faecal microbiome metabolism na ụmụ ejima toro eto.
Mmetụta na-egbu egbu nke Glyphosate na Sistemụ Ahụhụ: Nleba anya n'usoro
Flow Transgene: Ihe ịma aka na nchekwa n'ugbo nke ọka Landraces na mpaghara Semi-Arid Brazil.
Ihe nrịbama biochemical nke ọnọdụ imeju na-arụ ọrụ na serum ọbara nke oke na-eri soybean na ahịhịa ahịhịa na-eguzogide glyphosate.
Mmetụta soy mebere mkpụrụ ndụ ihe nketa na-eguzogide glyphosate na mkpokọ ahịhịa na ọkwa ụfọdụ metabolites nke mgbanwe nitrogen na oke.
Mmepe ọmụmụ nwa nke ụmụ oke ụmụ nwanyị na ihe ngosi massometric nke akụkụ oke nke ọgbọ abụọ na iji soybean gbanwetụrụ na Roundup.
Metabolism nke ogige nitrogen n'ọgbọ atọ nke oke n'okpuru mmetụta nke soy na-eguzogide mkpụrụ ndụ ihe nketa glyphosate na Roundup herbicide.
Kacha ọhụrụ NGO na-akọ
Nkwekọrịta na nri GM kwesịrị ịdabere na nyocha usoro
Imirikiti ọmụmụ ihe na-egosi nri GM ewu ewu Ọ bụghị dị ka nchekwa dị ka Counterpart
Ọtụtụ ndị ọkachamara ahụike na ụmụ akwụkwọ ahụike kwenyere na nri GM adịghị mma
Ọtụtụ otu ahụike na-ajụ maka nchekwa nri GM
Nnukwu Nkwekọrịta Na Nchekwa Nri Mezigharịrị Mgbanwe
A kwadoro nchekwa data a GMO efu USA, a 501 (c) 3 ọha mmasị na-abụghị uru, na nkwado site na GOS sayensị na GMWatch. Ọ bụ ezie na enweghị ụgwọ maka iji nchekwa data a, onyinye enwere ekele iji nyere aka kpuchie ụgwọ nke mmezi na mmelite na-aga n'ihu. Onyinye bụ ụtụ ụtụ isi nke iwu kwadoro.
Copyright © 2022 · GMO Nnyocha · Ikike niile echekwabara
Adịla erere m ozi nkeonwe m .